ဒူဒူကြီး: Optical displacement and measurement sensors
"Displacement and Measurement Sensors" တွေကို၊ distances ဆိုတဲ့ အကွာအဝေးနဲ့ heights ဆိုတဲ့ အမြင့်တွေတိုင်းတာရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ laser, LED, ultrasonic, contact နဲ့ eddy current sensors တွေကို အသုံးပြုသလို၊ optical sensors တွေကိုသုံးပြီး၊ အကွာအဝေးနဲ့ အမြင့်တွေကို တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
Fig. Optical System of the Displacement Sensor
optical sensors တွေမှာ drive circuit ရဲ့ lighting source မှထုတ်လွှင့်တဲ့ အလင်းတန်းကို၊ lens မှ စုစည်းလိုက်ပါတယ်။ စုစည်းထားတဲ့ condensed light ဟာ object ပေါါမှာကျရောက်ပြီး၊ အလင်းတန်း စုစည်းပေးတဲ့ condensed lens ကိုတော့၊ emitter lens လို့ခေါါပါတယ်။ object မှ အလင်းပြန်လာမယ့် reflected light ကို၊ detector lens မှာထပ်မံ စုစည်းကာ၊ condensed light အနေနဲ့ PSD လို့ခေါါတဲ့ one-dimensional position sensing device သို့ပို့ပေးပါတယ်။ object ရဲ့ position တနည်းအားဖြင့် measuring device မှ၊ အကွာအဝေးပြောင်းလဲ သွားတဲ့အခါ PSD မှာလက်ခံရရှိမယ့်၊ image formation position ဟာလည်းပြောင်းလဲသွားသလို၊ PSD ရဲ့ out put လည်းပြောင်းလဲ သွားပါတယ်။
displacement ကိုအထက်ပါ ပုံသေနည်းအရတိုင်းတာပြီး၊ 'A' နဲ့ 'B' ဟာ PSD ရဲ့ output တွေဖြစ်ပါတယ်။ 'K' ကတော့ span coefficient တန်ဘိုးဖြစ်ပြီး၊ 'C' ကတော့ offset တန်ဘိုးဖြစ်ပါတယ်။ 'A' နဲ့ 'B' တန်ဘိုး ကွာခြားချက်ဟာ ' illuminance' ဆိုတဲ့၊ သိသာမြင်လွယ်ထင်ရှားတဲ့ ကွာခြားချက်မျိုး မဟုတ်ပေမယ့် object နေရာပြောင်းရွှေ့မှုမှတဆင့်၊ ပေါါပေါက်လာတဲ့ light intensity ပြောင်းလဲမှုကတော့ သိသာ ပါတယ်။ light intensity ပြောင်းလဲမှုဟာ၊ object ရဲ့ position ပြောင်းလဲမှုမှတဆင့်ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ distance difference ဆိုတဲ့၊ အကွာအဝေးပြောင်းလဲမှုရဲ့ linear out put နဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါတယ်။
Fig. Regular reflection type
Fig. Diffuse reflection type
Optical displacement and measurement sensors တွေကို၊ regular reflection type နဲ့ diffuse reflection type ဆိုပြီးတွေ့ရပါတယ်။ regular reflection type မှာ၊ object မှ၊ ပြန်လင်းတန်းကို regular reflection အနေနဲ့ လက်ခံရရှိပါတယ်။ stable measurement အနေနဲ့ glossy surface object ဆိုတဲ့၊ အလင်းပေါက်အရာဝထ္ထုတွေနဲ့ metal ဆိုတဲ့ သတ္ထုတွေရဲ့ displacement ကိုတိုင်းတာရာမှာ၊ အသုံးပြု ပါတယ်။ diffuse reflection type မှာတော့ object မှ၊ ပြန်လင်းတန်းကို perpendicularly diffuse reflection အနေနဲ့ လက်ခံရရှိပြီး၊ wide measurement area တိုင်းတာရာမှာ၊ အသုံးပြုပါတယ်။
measured object ဟာတည်ငြိမ်နေတဲ့အခါ object ရဲ့ ပြန်လင်းတန်း resolution မှတဆင့် distance ကို တိုင်းတာပြီး၊ fluctuation ကို၊ linear output အနေနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ideal straight line မှာ linear output အနေနဲ့ရရှိနိုင်ပေမယ့်၊ error ရှိပြီး၊ FS-full scale ရဲ့ percentage of the measurement range ဆိုတဲ့ format အနေနဲ့ဖော်ပြပြီး၊ "1%" ခန့်ရှိပါတယ်။ ambient temperature အပြောင်းအလဲကြောင့် လည်း၊ linear output မှာ variation ဖြစ်ပေါါနိုင်သလို၊ "Temperature Drift" လို့ခေါါပါတယ်။
Fig. Response time
Fig. Response time and resolution
object ရဲ့ displacement နဲ့ width တို့ဟာ၊ steps အနေနဲ့ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားခဲ့လျှင်၊ analog output အနေနဲ့ရှိနေတဲ့ linear output ဟာ၊ (10%) မှ (90%) သို့လိုက်ပါပြောင်းလဲဖို့၊ အချိန်အတိုင်း အတာတခု ယူရပြီး၊ "response time" လို့ခေါါပါတယ်။ displacement, response time နဲ့ resolution တို့ကို၊ ချိန်ညှိယူနိုင်ပါတယ်။ displacement ကို၊ precisely measure displacement အနေနဲ့ တိတိ ကျကျတိုင်းတာလိုတဲ့အခါ၊ slower response time setting အနေနဲ့ချိန်ညှိယူပြီး၊ responsiveness ကိုလျှော့ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ fast response measure displacement အနေနဲ့၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန် တိုင်းတာ လိုတဲ့အခါ၊ faster response time setting အနေနဲ့ချိန်ညှိယူပြီး၊ resolution ကိုလျှော့ချပါတယ်။
Reference : Sensor များ - ကိုထွန်း, Marine Electrical & Automation Course - (ဦးခင်မောင်ဦး၊ အချိန်ပိုင်း ကထိက၊ စက်မှုဌာန၊ ရေကြောင်းပညာသိပ္ပံကျောင်း), Technical Guide - OMRON Industrial Automation, Australia,
Posted by ဒူဒူကြီး at 04:43